भद्रगोल प्रादेशिक अस्पताल : बिरामी छटपटाइरहन्छन्, डाक्टर भेटिँदैनन्
सुत्केरी ब्यथाले च्यापेपछि महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका- ११, पिगौनाकी किरण देवी अघिल्लो शुक्रबार प्रसूतिका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भर्ना हुन आइन् । शुक्रबार साँझ करिब ६ बजे किरणलाई अटोरिक्सामा अस्पताल ल्याएपछि उनका आफन्त डाक्टरको खोजीमा लागे । करिब १० मिनेटसम्म अस्पतालमा डाक्टर चहार्दै हिँडेपछि एकजना नर्स भेट्टाए ।
किरणका आफन्तले ग्लोब्स, मास्कसहितका मेडिकल सामग्री ल्याए । त्यसपछि नर्सले बिरामीको अवस्था हेरिन् । पाठेघरको मुख नखुलेको भन्दै उनलाई तत्काल भर्ना हुन सुझाव दिइन् ।
किरणको पीडा बढ्दै थियो । एक घण्टापछि पीडा असह्य भयो । त्यसपछि किरणका आफन्तले पुन: अस्पतालमा डाक्टर तथा नर्स खोज्न थाले । करिब चार घण्टासम्म उनीहरूले अस्पतालमा कर्मचारीको समेत अतोपत्तो देखेनन् । उनीहरूको चिन्ता बढ्न थाल्यो ।
किरणका आफन्तले अस्पतालमा डाक्टर बोलाइदिन स्थानीय नेतादेखि पत्रकारसम्मलाई हारगुहार गरे । उनीहरूले अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) डा. प्रमोद कुमार यादवलगायतलाई पटक-पटक सम्पर्क गरे । तर, आश्वासन दिनुबाहेक उपचारका लागि कोही नआएको किरणका काका विष्णुले गुनासो पोखे ।
विष्णुका अनुसार मेसुको मोबाइलको फोन उठाएका डा. मनिष पाण्डेले ‘त्यहाँ कोही न कोही हुनुपर्ने हो । खाना खान गए होलान्, एकछिनमै आउनुहुन्छ’ भन्ने जवाफ दिए ।
जलेश्वरमा अस्पताल हुँदाहुँदै उनका आफन्तले भरपर्दो सेवा र सुरक्षित सुत्केरीका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर ल्याएका थिए । तर, अस्पतालमा उनीहरूले सोचेजस्तो सुविधा पाएनन् । अस्पतालमा चहार्दा-चहार्दै ज्यानै जोखिममा पर्नसक्ने त्रास किरणको परिवारलाई हुन थाल्यो ।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा डाक्टर कुर्दै गरेका बिरामीका आफन्त ।
‘भतिजीलाई बेडमा राखेर डाक्टर र नर्सलाई कुरिरह्यौँ । उनको अवस्था एकदमै सिरियस हुँदै गयो । पीडाले उनी बेहोसझैँ भइन्,' विष्णुले भने, 'तर, कुनै डाक्टर, नर्स आएनन् ।’
किरणको अवस्था बिग्रँदै गएपछि आफन्तले उनलाई अस्पतालछेउमै रहेको निजी क्लिनिकमा लगे । क्लिनिकका डाक्टरले सुत्केरीको अवस्था हेरेर अप्रेसन गरी बच्चा निकाल्नुपर्ने बताएपछि किरणलाई जनकपुरकै धनुषा अस्पताल लगियो ।
‘हामी मजदुरी गरेर गुजारा गर्छौँ । गरिब भएरै सरकारीमा आएका थियौँ । यहाँ बिरामी पीडाले छटपटाइरन्छ तर कोही आउँदैनन् । यहाँ बिरामीलाई राखेर मार्ने त होइन नि,’ विष्णुले भने ।
धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका- ७ की २२ वर्षीया शिला यादव प्रसूतिका लागि गत सोमबार बेलुका प्रादेशिक अस्पताल आएकी थिइन् । पहिलो पटक सुत्केरी हुन लागेकी उनलाई घरदेखि नै पीडा तथा रक्तश्राव हुन थालिसकेको थियो । अस्पताल आइपुग्दा अझै बढ्यो ।
ड्युटीमा खटिएका अस्पतालका तीन जना कर्मचारीले उनको अवस्था हेरेर बेडमा आराम गर्न सुझाव दिए । कर्मचारीले पीडा र क्तस्राव समान्य रहेको बताए पनि शिलाको अवस्था असामान्य देखेपछि उनका आफन्तमा चिन्ता बढ्न थाल्यो ।
उनीहरूले डाक्टर बोलाइदिन ती कर्मचारीलाई हारगुहार गरे । करिब एक घण्टामासमेत डाक्टरको अत्तोपत्तो नदेखिएपछि शिलाका श्रीमान् रमण निजी अस्पताल चहार्न थाले ।
‘त्यहाँको व्यवस्था पूरै भद्रगोल थियो । डाक्टर आउने ठेगान थिएन । बच्चा कुन स्थितिमा छ भनेर बुझ्न खोज्दा अल्ट्रासाउण्ड सेवा बन्द थियो,’ रमणले भने, ‘अस्पतालबाहिर पनि कतै अल्ट्रासाउण्ड गर्ने क्लिनिक खुलेको थिएन । उनी झन् सिरियस हुन थालेपछि प्राइभेट अस्पतालको खोजीमा लागेँ ।’
त्यसपछि साथीको सल्लाहअनुसार उनी जनकपुरकै एक निजी अस्पताल पुगे । तर, उनको पहिलो सन्तान जीवित रहेन ।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरी पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छ । पछिल्लो समय अस्पतालमा लापर्बाही बढेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् । अस्पतालमा डाक्टर तथा कर्मचारीको उपस्थिति न्यून देखिन्छ । लापर्बाही र समयमा डाक्टर नभेटिनाले बिरामीहरू निजी अस्पताल जान बाध्य भएका छन् । डाक्टर तथा कर्मचारीहरू अस्पतालमा कम भेटिने गरेको बिरामीका कुरुवा बताउँछन् ।
बिरामीको अवस्था सिरियस भए पनि दिनको एक पटक मात्र डाक्टर अस्पताल आउने गरेको महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिकाकी खुमिया देवीको गुनासो छ । खुमिया देवी नातिनीलाई प्रसूति गराउन अस्पताल आएकी हुन् । अस्पतालका कर्मचारीलाई डाक्टर बोलाइदिन पटक-पटक आग्रह गरे पनि नसुनेझैँ गरेको उनले बताइन् ।
‘बिहान १० बजे एकपटक डाक्टर आउनुहुन्छ । त्यसपछि बिरामी छटपटाएर बस्नुपरे पनि डाक्टर आउँदैनन् । उसलाई धेरै पीडा भयो भने नर्सलाई बोलाउन जान्छौँ,' खुमिया देवी भन्छिन्, 'कुनै बेला नर्स आउँछन्, कुनै बेला भेटिँदै भेटिँदैनन् ।'
अस्पतालमा बिरामीलाई सेवासुविधाको अभाव छ । सरसफाइ नहुँदा दुर्गन्ध बढेको छ । बिरामीहरू अस्पतालमा डाक्टर तथा नर्सको पर्खाइमा पीडा सहन बाध्य छन् ।
तर, डा. मनिष पाण्डे यी आरोप निराधार रहेको दाबी गर्छन् । अस्पतालमा २४सै घण्टा डाक्टर बस्न सम्भव नरहेको उनले बताए ।
‘पन्ध्र जना डाक्टर त्यहाँ बस्न सक्दैनन् । भएका डाक्टरले ओटी र डेलिभरी गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘अस्पतालमा डाक्टर छैनन् भने खाना खान गएका हुन सक्छन् । डाक्टरलाई धेरै प्यासेन्ट हेर्नुपर्छ ।’
होली पर्वका दिन अल्ट्रासाउन्ड बन्द भएकाले बिरामी बाहिर गएको हुन सक्ने उनले बताए । डाक्टर तथा अस्पतालका अन्य कर्मचारीले आफ्नो डयुटी पूरा नगरेको गुनासो बढेको प्रश्नमा उनले भने, ‘पूरा ड्युटी नगरेको भए हस्पिटल कसरी चल्थ्यो र ?’
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २३, २०७७, १०:१०:००